Transfer mpianatra - Poltava Medical & Dental Academy
OKRAINIANA PAHASALAMANA SY nify / STOMATOLOGICAL Akademia ho Poltava National University Medical Ary Dental "PSMA" no hany oniversite fitsaboana manana fahazoan-dalana manokana avy amin'ny Ministeran'ny Fampianarana ny Ukraine mba hanaiky mpianatra vahiny rehetra taona. USMA OR PSMA manaiky famindrana mpianatra avy amin'ny andrim-panjakana hafa rehetra eto amin'izao tontolo izao.
Mpianatra izay te-hamindra ny nahazoan-dalana ho OKRAINIANA MEDICAL STOMATOLOGICAL Academy (USMA) dia tsy maintsy mametraka ny antontan-taratasy manaraka ireto ny fieken-keloka:
• School taratasy
• Official akademika transcripts avy aloha nanatrika kolejy sy ny oniversite(amin'ny tsipiriany ny foto-kevitra sy ny bola ora).
• Feno Application teny
Mpianatra dia afaka mandefa ny antontan-taratasy amin'ny alalan'ny mailaka (umsa@admission.center). OKRAINIANA PAHASALAMANA SY nify / STOMATOLOGICAL Akademia ho Poltava National Medical Ary Dental University (PSMA) mahay manaiky famindrana ireo mpianatra avy amin'ny anjerimanontolo hafa ny Ukraine sy manerana izao tontolo izao. Miasa eo amin'ny enim-bolana izahay rafitra. Fieken-keloka dia mifototra amin'ny ankapobeny akademika firaketana an-tsoratra. Misy fandaharana be fifaninanana sy ny fepetra takiana ho an'ny hodinihina dia azo inoana fa ho ambony.